माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पछि ११ कक्षा पढ्न काठमाडौं आउने धेरै विद्यार्थीको सपना हुन्छ । र, अभिभावकको पनि राम्रो स्कुलमा छोराछोरीलाई पढाउने चाहना हुन्छ । तर, छोराछोरीलाई एक्लै काठ्माडौं राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कहाँ राख्ने ? कति खर्च लाग्ला ? आफ्नो क्षमताअनुसार काठमाडौंमा राखेर अभिभावकले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छन् ? यति खर्च लाग्ने भयो भने पढाउँछु भन्ने अभिभावकको सोच हुन सक्छ ।
एसईईपछि काठमाडौं आएर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कहाँ बस्ने ? कति खर्चमा बस्न सकिन्छ भनेर बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं आएर होस्टल र कोठा लिएर बसेका विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरेका छौँ ।
– विद्यालयको होस्टेल
– बाहिर व्यक्तिको होस्टेल
– कोठा भाडामा लिएर
बाहिरबाट आएका विद्यार्थी विद्यालयको होस्टेल, व्यक्तिले सञ्चालन गरेको होस्टेल वा कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेको पाइन्छ । आफूलाई बस्दा कहाँ सहज हुन्छ, त्यहाँ बस्ने गरेको पाइन्छ । आफैँ खाना पकाउन गाह्रो लाग्ने र पढाइमा असर पर्छ भने विद्यालय वा व्यक्तिको होस्टलमा बस्न सकिन्छ । खाना पकाउने समयमा पनि अध्ययन गर्ने समय मिल्छ । यदि आफैँ पकाउने हो भने कोठा लिएर बस्न सकिन्छ ।
थोरै खर्चमा कसरी बस्ने ?
ममता अधिकारी सिन्धुलीबाट आएकी हुन् । प्लस–टु लेभलको डिप्लोमा कोर्स गरेकी उनी कुपन्डोलस्थित एक होस्टेलमा बस्छिन् । ‘बाहिर कोठामा एक्लै बस्नुपर्ने । होस्टेलमा अरु साथी पनि हुने भएकाले होस्टेल रोजेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘होस्टेलमा बसेपछि पढ्ने समय पनि हुन्छ ।’
उनी बसेको होस्टेलमा महिनामा ४ हजारदेखि ६ हजारसम्ममा बस्न पाइन्छ । उनी दुई जना बस्ने रुममा बस्ने उनले महिनाको ६ हजार तिर्छिन् ।
‘होस्टेलमा ६ हजार तिरेको छु । खानबस्न यहीभित्र हो । बाहिर घुम्न निस्क्यो भने मात्र खर्च लाग्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘म पढ्न आएकी हुँ । त्यति घुम्दिनँ । घुम्यो भने खर्च त बढ्छ । कहिलेकाहीँ बाहिर निस्कन्छु । होस्टेलबाहेक महिनाको २ हजार भए खर्च पुग्छ ।’
सोलुखुम्बुका अमित राई लाजिम्पाटमा कोठा लिएर बस्छन् । उनीसँगै दिदी र भाइ पनि बस्छन् । उनीहरूले दुईवटा कोठा भाडामा लिएका छन् । कोठा भाडा ९ हजार र पानी र बिजुलीको गरेर १० हजार तिर्छन् । महिनाको ३० हजार रासनमा खर्च हुन्छ । जम्मा ४० हजार उनीहरूको खर्च हुन्छ । तीन जनालाई भाग लगाउने हो भने एक जनाको भागमा १३ हजार ३ सय पर्न जान्छ । ‘सबैभन्दा बढी तरकारीमा खर्च हुन्छ,’ अमितले भने, ‘बाहिर खर्च गर्‍यो भने बढी हुन्छ । नत्र १० देखि १३ हजारसम्म भए पुग्छ ।’
दाङका दिलीप चन्द नयाँ बानेश्वरमा कोठा लिएर पढिरहेका छन् । उनी र बहिनी बस्छन् । उनीहरूको महिनामा २० देखि २५ हजार खर्च हुन्छ । ‘दुई जनाका लागि २५ हजार खर्च हुन्छ, दिलीपले भने, ‘एक जनाको भागमा १२ हजार खर्च हुन्छ ।’
डोल्पाकी रेश्मा न्यौपाने कलंकीमा कोठा लिएर बसेकी छन् । प्लस टु पढ्न आएकी उनलाई दाईदिदी पनि भएकाले केही सहज भयो । चार जना बस्ने भएकाले उनीहरूले एक फ्ल्याट नै भाडामा लिएर बसेका छन् । कोठा भाडा र खाना गरेर उनीहरूको ३० हजार खर्च हुन्छ । ‘सबै जनालाई गरेर ३० हजार खर्च हुन्थ्यो । बुबाआमाले नै पठाउनुहुन्छ । ३० हजार खान र बास्नबाहेक कलेजको छुट्टै खर्च लाग्छ,’ रेश्माले भनिन् ।
झापाकी रक्षा खनाल पनि काठमाडौंमा होस्टेलमा बस्छिन् । उनी सुरुदेखि नै होस्टेलमा बसेकी हुन् । उनले सुरुमा होस्टेलमा एड्मिसन शुल्क ४ हजार तिरिन् । ‘त्यसपछि मासिक ९ हजार ५ सय तिर्छु,’ उनले भनिन्, ‘रुममा २ जना बस्छौँ । बिहान खाजा, खाना, दिउँसो खाजा र बेलुका खाना हुन्छ । बाहिर खानै पर्दैन । यदि बाहिर खायो भने मात्र अरु खर्च लाग्ने हो । हप्तामा २ पटक लुगा धोइदिने र वाईफाईको सुविधा छ ।’
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । एसईईपछि कक्षा ११, १२ र उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिरबाट बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थी काठमाडौं आउँछन् ।
कहाँ बस्दा राम्रो ?
एक्लै भएमा होस्टेलमा बस्दा सहज हुने र दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि भए कोठा लिएर बस्दा उपयुक्त हुने उनीहरूले अनुभव सुनाए । अभिभावक नभएपछि बालबालिका स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छन् । यो समयमा नयाँनयाँ साथी पनि बनाउँछन् । त्यसैले साथीसङ्गीको संगतले कोही सही कोही गलत बाटो हिँडिरहेका हुन्छन् । उपत्यकाबाहिरबाट आएर होस्टेलमा बसेका विद्यार्थीको अभिभावक भनेको होस्टेल सञ्चालक नै हो ।
त्यसैले कस्तो होस्टेलमा राख्ने ? होस्टेल सञ्चालक कस्ता छन् ? अभिभावकले बुझेर राख्नुपर्ने हुन्छ । होस्टेल सञ्चाकहरूले आफ्नै छोरा छोरी जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयको होस्टेलमा बस्ने हो भने शिक्षकहरूले पनि निगरानी गर्ने भएकाले पढइमा सहयोग पुग्छ ।
यदि बाहिर कोठा खोजेर बस्ने हो भने राम्रो घरबेटी भएको घरमा राख्नुपर्ने हुन्छ । घरबेटीसँग नियमित सम्पर्कमा अभिभावक रहनुपर्छ । अभिभावकले छोरा छोरीलाई होस्टेल वा कोठामा राखेपछि के गर्छन् ? विद्यालय जान्छन् कि जाँदैनन् ? पढाइमा ध्यान दिएका छन् कि बाहिरी कुरामा ? यी विषयमा होस्टेल सञ्चालक, विद्यालय र घरबेटीसँग नियमित कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७, १३:४०:००